SEHATRY NY ANKIZY - ORAN'NY NTAOLO
Azo tsoahina amin’ity «famantaranandro voajanahary» na «ora malagasy» na ny "famataranandron'ny Ntaolo"ity, fa tsy ny fizotran’ny masoandro avy any antsinanana ka milentika any andrefana, ihany akory no nandaminany ny fotoany. Fa niainga indrindra tamin’ny fifandraisana sy fandinihany akaiky ireo zavaboahary manodidina azy.
Azo antsary ny endrim-piarahamonina niainana tamin’izany vanim-potoana izany.
Nanana lanja lehibe ny akoho sy ny omby loharanon-karena ary ny vary fototsakafo.
Ankehitriny, toa mipetraka amin’ireo mpandalina manokana ny fandinihina ny tontolo sy ny voahary ka lasa taranja ampianarina sy boky vakiana sisa.
Marihina fa mivelatra dia mivelatra ny fifandrifian'ny ora malagasy sy ny ora ankehitriny nohon'ny tsy fanavahany ny ora ririnina sy ny ora fahavaratra. Ohatra rehefa ririnina dia miposaka tara ny masoandro ary milentika aloha tsy toy ny amin'ny fahavaratra.
Misy ohabolana vitsivitsy misy ifandraisany amin’ity ora malagasy ity:
-Aza manao masoandro avy any atsinanana: ny avo ihany no taingenana; fa manaova masoandro avy andrefana: izay mivoha idirana avokoa.
-Folaka ny andro ka malemy ny lalany.
-Akoholahy sy ny masoandro, ka mifamotoana samy lavitra.
-Akoholahy tsy naneno toy izay, lanin’ny kary.
-Manao fanairan’akoho : mifoha maraina, ka eo atsimom-patana ihany.
-Sakalava sy Betanimena, ka iry masoandro iry no iraisana .
-Tsy misy adala tahaka ny akoho: fa nony hariva ny andro, mahalala mody.
-Ny mpamosavy aza mivoaka misasakalina dia hita ihany, ka indrindra fa izay manao ratsy?
-Marain-tsy lasandavitra hoatry ny akoho.
Fanamarihina : ny LOAKANDRO na RA(HA)LOAKANDRO , izay teny tsy fampiasa loatra ankehitriny dia midika ho ampitson’ny rahafakampitso na andro faha-efatra ny anio (anio → rahampitso → rahafakampitso → raloakandro
I- MISASAKALINA hatramin'ny MITATAOVOVONANA
II-MITATAOVOVONANA hatramin'ny MISASAKALINA
Tamin’ny andron’ny Ranavalona III, apoaka tafondro amin’ny 10 alina ampahafatarana ny vahoaka fa tsy misy mahazo mandehandeha intsony. Io ORA io no MIPOAKA TAFONDRO na MIPOA-TAFONDRO.
Maneno sahona *
Latsaka ny andro
Misafo helika ny kary
-Mby andry atsimo
Maneno akoho tokana
Ambavafisoko ny andro*
Maneno akoho faharoa
Mody omby terabao
Tafapaka ny andro*
Mivoaka omby terabao
Mitatao haratra ambany
Bana ny andro
Amboditrano ny andro
Mitatao haratra* ambony
*** : tonga amin'ireo toerana ireo ny tanamasoandro
*Tafapaka ny andro: mahazo ny rindrina atsinanan'ny trano ny tanamasoandro.
-Ny VOVONANA dia ilay hazo vaventy mitsivalana ambony indrindra ka ihaonan’ny tafotrano.
-*Ny HARATRA dia ireo hazo vaventy mitsivalany mitondra ny tafo amin’ny lafiny roa. Misy ambony, misy ambany ary mety misy anelanelany
-Ny VARIVARINA kosa dia ireo hazo madinika anelanelany andrian’ny tafotrano.
Fomba fiteny: “Tapenaka mitondra ny vovonana, vovonana iadian'ny lohany,varivariny andrian'ny tafony”.